ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကြီးကို မိန်းမယူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြရင်း လွမ်းဆွတ် သတိရနေတဲ့ စိုင်းစိုင်း – Suehninsi
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ စိုင်းစိုင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရင်ထဲထိရောက်စေတဲ့ တေးသီချင်းများနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားသူဖြစ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ရူးသွပ်ကာ နှစ်သက်မြတ်နိုးသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တင်မကပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးမှာလည်း
ကျွမ်းကျင်ပြီး တော်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ပြောရင်မှားမယ် မထင်ပါဘူး.။ အနုပညာတွေကို မလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ သူ့ရဲ့ စိတ်အပျင်းပြေစရာအနေနဲက ချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အတိတ်က အမှတ်တရလေးတွေ အကြောင်းကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးတင်ကာ မျှဝေလေ့ရှိသူပါ. ။ ဒီနေ့ ဇွန်လ (၁၆)ရက်နေ့မှာ စိုင်းစိုင်းက ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပြောစကားလေးကို ပြန်သတိရမိတဲ့ အကြောင်းလေး
“အဖေနဲ့ကျွန်တော် ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံတန်းမှာ အတူနေကြတုန်းကပေါ့။ သားအဖနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ပျင်းစရာ၊ နေရေး စားရေး လျှော်ဖွတ်ရေးကအစ စီမံပေးမယ့်သူမရှိတော်တော်ကို ကသီလင်တဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတွေမှာ အိမ်မှုကိစ္စ အရာရာကို အမေတွေက ဦးဆောင်တာများတယ်မလား။ နောက်ပြီး ဆေးပေးမီးယူတို့ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်းတို့ဆိုတာလည်း လိုသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့
ကျွန်တော်လည်း အိမ်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာ အိမ်ရှင်မ ရှိမှကောင်းမှာဆိုပြီး အဖေ့ကို မိန်းမယူဖို့ တိုက်တွန်းတော့ – “ဟေ့ကောင် မင်းဟာမင်းယူ ငါတော့ နှစ်ခါမမိုက်ဘူး” တဲ့။ လွမ်းတယ် အ ဖေ ရာ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ရှိစဉ်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောကာ သတိရပြီး လွမ်းတဲ့စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်နေတဲ့ ပုံပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖခင်ဖြစ်သူကို သတိရလွမ်းဆွတ်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်အတွက် အားပေးစကားလေးတွေ ပြောပေးသွားပါဦးနော်.။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံကြျော အဆိုတျော သရုပျဆောငျ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ စိုငျးစိုငျးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရငျထဲထိရောကျစတေဲ့ တေးသီခငျြးမြားနဲ့ သိမျးပိုကျထားသူဖွဈပွီး အနုပညာနဲ့ပတျသကျရငျ ရူးသှပျကာ နှဈသကျမွတျနိုးသူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတငျမကပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးမှာလညျး
ကြှမျးကငျြပွီး တျောတဲ့သူတဈယောကျလို့ ပွောရငျမှားမယျ မထငျပါဘူး.။ အနုပညာတှကေို မလုပျဖွဈတဲ့ အခြိနျလေးတှမှော သူ့ရဲ့ စိတျအပငျြးပွစေရာအနနေဲက ခဈြခငျတဲ့ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ အတိတျက အမှတျတရလေးတှေ အကွောငျးကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးတငျကာ မြှဝလေရှေိ့သူပါ. ။ ဒီနေ့ ဇှနျလ (၁၆)ရကျနမှေ့ာ စိုငျးစိုငျးက ဖခငျဖွဈသူရဲ့ ပွောစကားလေးကို ပွနျသတိရမိတဲ့ အကွောငျးလေး
“အဖနေဲ့ကြှနျတျော ဘုရငျ့နောငျ ပှဲရုံတနျးမှာ အတူနကွေတုနျးကပေါ့။ သားအဖနှဈယောကျတညျးဆိုတော့ ခွောကျကပျကပျနဲ့ ပငျြးစရာ၊ နရေေး စားရေး လြှျောဖှတျရေးကအစ စီမံပေးမယျ့သူမရှိတျောတျောကို ကသီလငျတဖွဈပါတယျ။ မိသားစုတှမှော အိမျမှုကိစ်စ အရာရာကို အမတှေကေ ဦးဆောငျတာမြားတယျမလား။ နောကျပွီး ဆေးပေးမီးယူတို့ စီးတဲ့ရေ ဆညျတဲ့ကနျသငျးတို့ဆိုတာလညျး လိုသေးတယျ။ အဲဒါနဲ့
ကြှနျတျောလညျး အိမျကို အုပျခြုပျဖို့ဆိုတာ အိမျရှငျမ ရှိမှကောငျးမှာဆိုပွီး အဖကေို့ မိနျးမယူဖို့ တိုကျတှနျးတော့ – “ဟကေ့ောငျ မငျးဟာမငျးယူ ငါတော့ နှဈခါမမိုကျဘူး” တဲ့။ လှမျးတယျ အ ဖေ ရာ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ။ စိုငျးစိုငျးကတော့ ဖခငျဖွဈသူနဲ့အတူ ရှိစဉျက ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို ပွောကာ သတိရပွီး လှမျးတဲ့စိတျတှကေို ဖွဖြေောကျနတေဲ့ ပုံပါပဲနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးလညျး ဖခငျဖွဈသူကို သတိရလှမျးဆှတျနတေဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျအတှကျ အားပေးစကားလေးတှေ ပွောပေးသှားပါဦးနျော.။